Izicwangciso zeTiffany - Uthethathethwano Ring Basics
Ukuba uyayithanda imigca yakudala kunye nesibheno esingapheliyo, iringi yokuzibandakanya kunye nokuseta kukaTiffany lukhetho olukhulu. Nokuba uthenge isiseko sokwenyani, esinophawu lwentengiso yeTiffany solitaire ukusukaTiffany kunye neC.okanye uthenge enye yeeringi ezininzi eziphefumlelwe lolu luyilo luhle, uya kufumanisa ukuba olu seto lulula nolunobunkunkqele lubalaselisa ubuhle benyameko yedayimane yakho.
Ukuthenga iRing Engagement kunye neTiffany Setting
Nangona iinkampani ezininzi zobucwebe zixelisa useto lukaTiffany, Tiffany kunye neC. kuphela kwenkampani ephethe uphawu lwentengiso kolu loyilo lwendandatho. Okokuqala kudalwe ngo-1886 nguCharles Lewis Tiffany, esi sicwangciso silula sikhawulezayo saba luyilo lotyikityo lwenkampani eyaziwayo yobucwebe. Ukusukela ngoko, olu luyilo lube yiklasikhi. Ngapha koko, ngokuka Forbes , I-Tiffany ejikeleze i-solitaire eqaqambileyo yeyona ndawo isetyenzisiweyo esidibanisa ukuhlangana.
Imisesane yokuzibandakanya emnyama
Imifanekiso yeDayimane Solitaires
Iifoto ezi-3 zeDayimani yokuBandakanya iiNdawo
Le iringi lolona khetho lufanelekileyo lwabazakuthi abafuna iseti engaphelelwa lixesha eza kugqamisa, kunokuba ibongamele, ukuqaqamba nomlilo wedayimani yabo exabisekileyo. Ngumsesane oya kuwuthanda ubomi bakho bonke, kwaye uza nesiqinisekiso sobomi bakho bonke.
Intaba yeTiffany ilula: ii-prongs ezintandathu zibambe ngokukhuselekileyo idayimani enqamlezileyo ekhazimlayo ejikeleze umbhinqo wayo (elona candelo lityebileyo lelitye), iphakamisa ngaphezu kwebhendi yeplatinam. Iiprongs zahlulwe ngokulinganayo kujikelezo lwelitye, elinganisa ulingano lobume bedayimane.
Ungayithenga le ring ngayo nabuphi na ubungakanani phakathi kwe-4 ne-11, kubandakanya ubukhulu besiqingatha. Ngenxa yebhanti yayo elula, le ndandatho ngumgqatswa omkhulu wokutshintsha ubungakanani ukuba ubungakanani bomnwe butshintshile kule minyaka idlulileyo.
Ubungakanani beDayimani ekhoyo
Isandi sokuzibandakanya kweTiffany
I-Tiffany & Co ithengisa le ndandatho intle ngoluhlu olubanzi lweedayimane eziqinisekisiweyo zikaTiffany, zonke zisikwe ngokuqaqambileyo. Ungayithenga le solitaire elula nge-0.25-carat gem ukuba uhlahlo-lwabiwo mali okanye uhambe ngokukhulu njengoko ungathanda ukuba ufuna ukwenza ingxelo.
Ixabiso lendandatho lahluka kakhulu ngokuxhomekeke kubungakanani bedayimane oyikhethileyo, ukusukela malunga ne- $ 1,800 ye- Ixabiso le-0.25-carat ukuya kwi-53,000 yeedola ukuya ku I-2.5-carat okanye iidayimani ezinkulu .
Izibonelelo zeClassic Tiffany Solitaire
Kukho izizathu ezininzi zokujonga i-solitaire kunye nokuseta kweTiffany:
Ngenxa yokuba useto luphakanyisiwe kwaye luvulekile phakathi kweeprongs, ivumela ubuninzi bokukhanya kwilitye, kugxininisa iipropathi zalo ezibonakalisayo nezibonisayo ezenza umlilo wedayimane ohlukileyo kwaye ukhazimle.
Iiprong ezintandathu zenza ukuba olu seto lukhuseleke ngokuthe chatha, kwaye zahlulwe ngokufanelekileyo kwaye zenziwe kakuhle iiprongs zomelele kwaye zomelele ngaphandle kokuphazamisa ubuhle belitye.
Kungenxa yokuba uTiffany & Co usebenzisa ezona zixhobo zigqibeleleyo kuyilo lwabo, iiseto ezilula, ezivulekileyo ziluncedo ekuqaqambiseni ubuhle obothusayo bezo gem.
Ukuvuleka kokusetwa kunokudala ubungakanani bekharati enkulu, inike izibini ukhetho lokukhetha umgangatho ophakamileyo nangona lilitye elincinci ngaphandle kokuphulukana nesibheno sendandatho engacacanga.
Uyilo oluphefumlelweyo lukaTiffany oluvela kwezinye iJewelers
Isimo sokwenene sikaTiffany lukhetho lwakudala lwabazakutshata, kodwa igama loyilo aliyiyo inketho efanelekileyo kwisibini ngasinye. Ngelixa amakhonkco e-Tiffany ayinyani eza needayimane ezintle, ubuchwephesha obukhethekileyo, kunye negama eligcina igama, zikwaphatha ixabiso elinexabiso eliphezulu kunezinye iindlela.
Ukuba ufuna le ndlela imangalisayo yesolitaire, ungathenga uyilo oluphefumlelweyo lukaTiffany kwinani labathengisi. Qwalasela ezi ndlela:
Ngaba unokuyivula ifowuni yakho ukuba usatyala kuyo?
Umjikelo osikiweyo kaLisa okwiGemvara
Umjikelo weSika uLisa Ring -Ukhetho oluhle oluvela eGemvara lubonisa ibhendi yeplatinam ejikeleze i-2.9mm kunye nokuseta oku-prong ezintandathu ngokufana kakhulu nohlobo lwangempela lweTiffany. Iza nedayimani eyi-0.8-carat, kodwa ungayenza ngokwezifiso ilitye eliyigugu elikhethiweyo. Ifumaneka ngobukhulu kane nge-10, ithengisa malunga ne- $ 3,900.
Ukuseta i-Platinum Comfort Fit Ring -Le solitaire ilula evela kwi-Brilliant Earth inebhendi ye-2mm kunye neephononongo ezine ukuxhasa idayimane ekhazimlayo ejikelezayo. Nangona ineeprong ezine kuphela endaweni yesithandathu sikaTiffany, esi sicwangciso sinika ukujonga okufanayo ngexabiso elifikelelekayo. Ifumaneka nakweyiphi na ubungakanani, ithengisa malunga ne- $ 800 kuseto lodwa kwaye ihlala iidayimani ezijikelezileyo.
Ukucwangciswa kweRandi yePlatin yePlanethi ephantsi -I-Blue Nile ikwabonelela ngenketho yesitayile seTiffany esineeprong ezine. Ibhendi yeplatinam inobubanzi obuyi-2.5mm kwaye ijikeleze intuthuzelo. Kwakhona, olu seto lunee-prong ezimbini ezimbalwa kunohlobo lwangempela lweTiffany, kodwa luyafikeleleka kakhulu. Isimo sisodwa sithengisa nge- $ 730. Ungayibeka ngedayimane ejikelezileyo oyikhethileyo kunye nobungakanani ukuze ulingane nomnwe wakho.
Ukusekwa kweTiffany okuyinyani kuya kuba ngumgangatho obalaseleyo, kodwa isangqa seTiffany esivela kwenye ijeeler asinakho ukufikelela kuloo migangatho iphakamileyo. Kubalulekile ukujonga umgangatho weringi ephefumlelweyo kaTiffany ngaphambi kokuba uthenge kuba akukho zinkcukacha zibanzi kwesi sethingi ukuphazamisa ukungafezeki okuncinci.
Gcina ezi ngcebiso engqondweni:
Khangela ulwahlulo olulinganayo, olulinganayo oluhambelanayo kunye nebhendi yentsimbi kunye ne-symmetry yelitye.
Qinisekisa ukuba iiprongs zixinene ngokwaneleyo ukubonelela ngokhuseleko olwaneleyo kodwa zincinci ngokwaneleyo ukuba zingaphazamisi kubuhle belitye.
Ilitye kufuneka libe kwinqanaba kwi-prongs kwaye ligcinwe ngokukhuselekileyo ziifeleni ezincinci kwiprong nganye.
Iiprongs kufuneka zijikelezwe kwaye zigudise ukunciphisa amathuba okubambeka kwimpahla, iinwele, okanye ezinye izinto.
Ngenxa yokuba useto lohlobo lwe-tiffany luvulekile kakhulu, umbala wedayimane kunye nokucaca kubaluleke kakhulu xa ukhetha umsesane womgangatho. Nokuba ukungafezeki okuncinci kunokuqapheleka ngaphandle kokufihla ukubekwa okanye ukongezwa kwamatye okugxininisa ukuphazamisa iliso, kuba ukuseta okulula ngokukhawuleza kutsalela ingqalelo kwilitye eliphakathi.
Nokuba uthengela useto lwangempela lweTiffany kwisangqa sakho sokuzibandakanya okanye ukhethe umsesane obonisa ezinye zezinto zakudala zoyilo oludumileyo, uya kufumanisa ukuba le yiringi engaphumiyo kwisitayile. Emva kweminyaka engaphezulu kwenkulungwane yokuthandwa, le ndlela yesangqa iklasikhi esiqinisekileyo. Kuya kuba mnandi kwisikhumbuzo seminyaka engama-50 somtshato njengoko kunjalo kumhla wokuganana.
Iqela Uqeshiso Umculo Genres Utywala Ulutha Iindidi Zokudanisa Ukuthandana Imiboniso Yesilayidi
Imidlalo ye-rally yesikolo esiphakamileyo
zithini iingqukuva zamazwe angama-50
utsho njani ngesiFrentshi
Umama osentlungwini wokuphulukana nezicaphuno zonyana
uyicoca njani i-ps4 disc
into emnandi ukuyithetha kudade wakho